Chii chiri muzita reBlog? | Martech Zone
Mushure mekuverenga Kukurukurirana Wakashama by Robert Scoble uye Shel Israeri, Ndakafunga kuita shanduko kublog rangu. Kunyanya kukosha, zita reblog. Yangu blog yaingove "Douglas Karr”Pamberi, asi ini ndakaita rimwe basa pazita uye ndakasarudza Pane Kufurira uye kushandisa michina. Ini ndakanyora nezvazvo pano.
Ndakaita zvimwe zvinhu zvakanaka nesaiti futi, ndichishandisa magiraidhi zvakanyanya mukurumbira, mutsva wemusoro graphic ine yangu yekunyemwerera mug, uye kunyatso tarisa zvirimo. Ini ndinofanira kutaura, zvakadaro, kufarirwa kweblog kwakachinja zvakanyanya kubva kuchipazve zita. Ipo ini ndaiwanzowana runyerekupe rwe traffic kare, ikozvino ndiri kuwana akawanda akawanda mamwe ma hits.
Ini ndoda kufunga kuti kungori mhando yezvinyorwa zvakandibatsira kutora vamwe vaverengi. Asi semushambadzi wedhatabhesi, ndinoziva kuti kana iwe ukachinja chimwe chikamu chemushandirapamwe uye chengeta zvimwe zvese zvakafanana - kazhinji shanduko yawakaita inounza mutsauko. Mune ino kesi yaive ichitumidza zita rangu blog kune rinonakidza zita.
Ehezve, dai ndaive nezita rakadai Robert Scoble, Seth Godin, Malcolm Gladwell, nezvimwe ... Ini hapana chandinofanira kuita kunze kwekunamatira icho sezita rangu reblog. Zvisinei, Douglas Karr haina mukurumbira (zvakadaro). Handina kutengesa clip tsvuku kuti ive imba, handina kuburitsa ruzivo rweCIA nyowani, uye handina kufumura chakavanzika chehudiki! Ini handisi kutsvaga maminetsi gumi nemashanu emukurumbira, asi ini ndingade kune rimwe zuva kuisa idzi dzese pfungwa dzakabatana pamwechete muvhoriyamu imwe.
Ndiri kufara chaizvo kuti vazhinji venyu muri kuuya kuzoshanya. Kuchengeta blog kunogara kuri kumashure kwepfungwa dzangu. Ndadzidza zvakawanda kubva kuvanhu vazhinji zvekuti ndinofunga mablog., Zvingangoita, ndicho chinhu chakanakisa kuitika kuwebhu.
Tags: blog zitamalcolm mufarowellzitarobert scobleseth godinShel Israeri
Mazhinji eNhau Dzinogona Kukwana Kudhinda… New York Times Kudzikira
Jul 16, 2006 pa 12: 13 AM
Ko spike haina kuenderana here naSeth Godin akataura? (Makorokoto pane iyo BTW). Ndinoziva kuti haana kubatanidza kune ino saiti, asi ini ndaizofungidzira vashoma vanhu vaizo tsvaga pazita rako. Analytics inoratidza izvi zvachose? Ndiri kuda kungoziva….
Jul 16, 2006 pa 9: 51 AM
Ndakawana makumi maviri neshanu kubva pakutsvaga doug + karr musi iwoyo chaiwo, asi hapana kubvira. Ndiri kushandisa Google Analytics. Ini ndaikurudzira zvikuru kusaina, zvinonyanya kubatsira kana iwe uri kuyedza kuteedzera uye kukura kwako blog kuverenga. Zvakare, kana iwe uine WordPress, ingori nyaya yekuteedzera iyo script mune yako theme tsoka. Yakapusa kwazvo kumuka nekumhanya!
Jul 16, 2006 na5: 04 PM
Ini ndinogara ndichifarira kumwe kutsva kwekutanga kwekushandurwa kweshanduko. Izvi zvino zvave zvemwedzi. Ndeapi anga ari iwo epakati epakati mhedzisiro yeblog rako re-branding?
Ndingafarire yakarongedzwa GoogleAnalytics chati (inogona kunge maviri aine angangoita mavhiki matanhatu kufukidzwa), kungoona kana mhedzisiro yacho yapera mushure mechinguva uye zvakare, vamwe vakabatana kuzita rako nyowani neiyo imwechete yekubatanidza-zvinyorwa ( allinurl:…).
Ndinovimba iwe uchashambadzira inotevera.
Jul 16, 2006 na5: 14 PM
Ini zvechokwadi ndicharamba ndichikutumira uye ndichashambadza yekutevera. Ini ndakamisa dzinoverengeka shanduko kune ino saiti kazhinji. Ini handina kutarisira mukurumbira weiyi chaiyo blog yekupinda, hazvo. Ivo vane mutsa vanhu kubva Kukurukurirana Wakashama akatora kufarira zvakare. Ndiri kutya kuti zvinofambisa nhamba dzangu kusvika padanho apo mimwe mhedzisiro inogona kunge isingaite senge ine mutsauko. Iri idambudziko rakanaka kuva naro, zvakadaro!
Feb 19, 2007 at 10:33 PM
Ini ndingafarire yakagadziridzwa GoogleAnalytics chati (ingave maviri aine angangoita mavhiki matanhatu kufukidzwa), kungoona kana mabudiro acho apera mushure mechinguva uyezve, ko vamwe vakabatana kuzita rako nyowani neiyo imwechete link-zvinyorwa ( allinurl :?).
Kukadzi 20, 2007 na8: 08 PM
Ndatenda nekupindura! Ini ndakaburitsa akati wandei mamwe matanho kubva iyi posvo. Ini ndakasimudzira kukura - kusvika padanho rekuti izvozvi bhurogu inonyatsoshambidza traffic kumashure ikako. Idzo nhamba hadzina kumbonyura pazasi pezvaive mukutarisa kwaunoona saka ini ndichiri kutenda kuti kushandura zita kwakaita basa rakakura.
Jun 11, 2007 pa3: 53AM
ndatenda nemazano ako. Asi muGoogle Analytics pane nguva yekunonoka (kwemaawa matatu..mamwe maawa mana) dzimwe nguva zuva rimwe pamwe ..
Ini ndingaite chero chinhu zvacho? ndezve nguva yenguva here? kana iri dambudziko repamoyo neGoogle analytics?
Jul 3, 2007 pa 9: 02 AM
ndinofunga chikonzero chechinetso ichi chitsva chinongedzo. Iye zvino unogona kushandisa google analytics 's interface nyowani .. zvinoita kunge zvakanaka. uye kune anongoda maawa 3-4 chete.